कोरोनाभाइरसको संकटमा पनि नवउदारवादी लुट जारी रहने - Jhilko
कोरोनाभाइरसको संकटमा पनि नवउदारवादी लुट जारी रहने
काठमाडौ । नवउदारवादी सिद्धान्तले निराश कामदार लामो समय र कडा परिश्रम गर्ने दुबै हुने गर्छन र उनीहरू युवा अवस्थामै मर्ने गर्ने अवधारणा बोकेको छ ।
यो तर्ककको क्रुरतालाई अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ओबामा प्रशासकले उपयोग ग-यो । स्वास्थ्य सम्बन्धी ‘ओबामाकेयर’को योजना निर्माण गरी ओबामा प्रशासनले यो क्रुरताको उपयोग ग-यो । खेलमा छाला वा स्किन इन द गेमको आधार प्रस्तावनाको पछाडि लुकेको नवउदारवादी विचार छ ।
नवउदारवादका संस्थापक अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानले विकास गरेको १०१ नम्बरको नवउदारवादी विचारको रूपमा ‘स्किन इन द गेम’ हो जसले स्वास्थ्य हेरचाह उपलब्ध गराउने विचार बोकेको छ ।
यसको आधारभूत विचार भनेको मानिसले उनीहरूको आवश्यकता भन्दा बढी स्वास्थ्य हेरचाहको माग गर्ने भन्ने फ्राइडम्यानको अवधारणा हो । ओबामा केयरको योजना यसै आधारमा निर्माण गरियो ।
ओबामा केयर अघि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीहरूले जीवन र मृत्युसम्बन्धी निर्णय लिने प्रणालीको खेल तयार पारे । नवउदारवादी फेसन अनुसार ओबामाकेयरको अनियमित प्रक्रियाजस्तै स्वास्थ्य बिमक कम्पनीहरूले यो प्रणालीमा अधारित खेलको निरन्तरता दिए ।
रोब उरीका अनुसार ओबामा केयरको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटसम्बन्धी प्रावधानले भाइरस परीक्षणको खर्च बेहोर्न सक्छन् तर उपचार बारे व्यवस्था अस्पस्ट छ । कोरोना भाइरस सम्बन्धी विषयमा विचार गर्दा व्यक्तिलाई क्वरन्टिनमा बस्नु पर्दा कति दिनको ज्याला दिइने छ ? तिनका बालबालिकाको हेरचाह कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने ? घर बहाल वा घरको ब्याज कसले तिर्ने छ ? कसले रासनको पसलबाट खानेकुरा घरमा पु¥याउँछ ? त्यो खर्च कसले बेहोर्छ ? रोगबाट निको भएपछि त्यो व्यक्तिलाई कसरी फर्काइने छ? यस्ता विषयमा अस्पस्ट स्थिति भएको उनको भनाइ छ ।
ओबामा केयरको विधेयक पारित गराउने सफलता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिले पाएपनि स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था गर्न नसकिएको रोब उरी बताउँछन् ।
अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा नवउदारबादी सिद्धान्तको प्राकृतिले सामाजिक दार्शनिक विषय वस्तुको अधिकतम क्रुरता निर्माण गराएको छ । त्यसपछि ओबामाले औषधि कम्पनीलाई औषधिको पेटेन्ट दिने कार्यमा ढिलाइ गर्न आफ्नो सारा शक्ति लगाए । सरकारबाट टेक्नलजि र वित्तीय दुबै सहयोग प्राप्त गरेपछि माइकल ब्लुमबर्गले फाइदा उठाउँदै सन् २००९मा रहेको १६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति सन् २०२०मा ६४.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति बाउन सफलता पाएका हुन् ।
यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि रियल स्टेटबाट सम्पत्ति कमाउन सकेका हुन् । उनीहरू दुबैले सर्वोच्च प्रतिभा र कठिन मिहिनेतबाट सम्पत्ति जोडेको दाबी गर्छन् । वास्तवमा सन् १९७८ वरिपरिबाट वित्तीय पुँजीवादको घोषणाबाट उनीहरूले सम्पत्ति जोडेका हुन् । स्वास्थ्य हेरचाहका उपभोक्ताहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका बेला जुनसुकै रोजाइ रोजे पनि सान्दर्भिक नहुने अवस्थामा पुग्छन् ।
नवउदारवादी आधारभूत प्रस्तावना सदैव एक पागलपन डोज हुन्छ जसले धनी व्यक्तिलाई उनीहरूको लुटलाई निरन्तरता दिन लगाउँछ । कोरोनाभाइरसको यो अवस्थाबाट नवउदारवादी लुट जारी रहन्छ । स्वास्थ्य हेरचाहसम्बन्धी वस्तु आवश्यक नहुने अवस्थामा त्यति वस्तु खरिद गर्न नसक्नेले पनि किन्न बाध्य हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । नवउदारवादी विचारले लुटको निरन्तरताका लागि स्वाग गरिरहेको हुन्छ ।
एसियाली बजार रातो रेखातर्फ झ-यो ,लगानीकर्ता सुरक्षित ठाउँ खोज्दै
घाँस काट्न निस्केकी महिला मृता फेला
राति नै निधन भएका तामाङको परिवारजनले खबर गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष...
सुनको भाउमा दिनहुँ नयाँ रेकर्ड, तोलाको ८२ हजार ५०० रुपैयाँ
कोरोना भाइरसकै कारण अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तहसनहस भैरहेकोले सुरक्षित लगानीको रुपमा...
‘ढुकुरको शिकार गर्न तोपको प्रयोग’
सिटौला र पौडेलले नाम पठाएपछि उनीहरुको समूहमा जो जो असन्तुष्ट हुन्छन्, तिनीहरुलाई...